Turkiga oo shaaciyey sawirada Kooxdii Dishay/Qafaalatay Suxufi Khashoggi – Sawiro / Video • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Turkiga oo shaaciyey sawirada Kooxdii Dishay/Qafaalatay Suxufi Khashoggi – Sawiro / Video
Turkiga oo shaaciyey sawirada Kooxdii Dishay/Qafaalatay Suxufi Khashoggi – Sawiro / Video
October 11, 2018 - By: Hanad Askar
Warbaahinta Turkiga ayaa shaacisay sawirada kooxda Sirdoonka Sacuudiga ee la rumeysan yahay inay dileen ama qafaasheen suxufiga la baadi goobayo ee Jamal Khashoggi.
Sawirada la shaaciyey ayaa waxa laga soo duubay kamerooyinka ku rakiban Madaarka Istanbuul, Hotelka iyo waliba albaabka laga galo xarunta Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay Istanbul.
Suxufi Jamal Khashoggi ayaa 2dii bishan Oktoober u tagay qunsuliyada Sacuudiga inuu soo saxiixo waraaqaha furniinka xaaskiisa hore isagoo doonayey in maalintii ku xigtay uu guursado xaaskiisa cusub oo iyadu la socotay kuna sugeysay banaanka Qunsuliyada.
Khashoggi ayaa haweenayda la socotay (Xaaskiisa cusub oo u dhalatay Turkiga) u sheegay inay booliiska wacdo hadii uu kasoo baxi waayo xarunta Qunsuliyada muddo 2 saac ah.
Muuqaalada la shaaciyey ayaa waxaa muujineysa in 13:14 duhurnimo uu Jamal Khashoggi gudaha u galay xaruntaasi kadibna halkaasi dib ugama soo bixin.
Waxaa sidoo kale muuqaalada iyo sawirada la shaaciyey ka muuqda 15 nin oo isugu jira Saraakiil ka tirsan Militariga iyo Sirdoonka oo qaarkood la aqoonsaday, sida muuqata sawirka hoose waxaa ku jiray kooxdan mid kamid ah illaalada khaaska ah ee Maxamed Bin Salmaan iyo Sarkaalka Sare ee Wasaarada Difaaca Sacuudiga u qaabilsan arrimaha baaritaanka ama danbibaarista takhasuska (forensics).
Muhammad Saad al-Zahrani, illaalada khaaska ah ee Maxamed Bin Salmaan
Salah Muhammad Tubaigy, Khabiirka Sacuudiga ee baaritaanka (forensics).
Inta kale kooxdan ka kooban 15 ayaa u badan saraakiil ka tirsan ciidamada Komandooska iyo waliba sarkaal sare oo ka tirsan Sirdoonka Sacuudiga oo horey u fadhin jiray Safaarada Sacuudiga ku leeyahay London.
Kooxda ayaan dalka Turkiga ku yimid laba diyaaradood oo khaas ah, diyaarada koowaad ayaa timid Istanbul saqdii dhexe habeenkii ay soo galeysay 2da Oktoober saacado kahor intuusan Khashoggi tagin xarunta Qunsuliyada oo horey loogu sii balamiyey 4 maalmood kahor.
Diyaaradan ayaa siday kooxda kowaad oo la sheegay inay kusii sugayeen xarunta falka uu ka dhacay, Sawirada la shaaciyey ayaa waxaa ku jira kuwii laga soo qaaday markii ay kasoo degeen Madaarka iyo Hotelkii ay habeenkaasi seexdeen.
Diyaarada labaad ayaa timid Istanbul galabkii uu falka dhacay labo saac kadib markii Khashoggi xarunta uu galay, waxaana la sheegay inay labada diyaaradood isla maalintaasi ka dhoofeen Madaarka Istanbul iyagoo dib ugu noqday Riyadh.
Xogtan ayaa sida muuqata waxa warbaahinta Turkiga siiyey hay’adaha amaanka ee dalkaasi oo raba inay cadaadis saaraan Sacuudiga, balse Madaxda Sare ee Dowlada Turkiga ayaan weli si dhameystiran arrintan weli uga hadal marka laga reebo codsiga ay u direen Boqortooyada Sacuudiga.
Dhinaca kale warar laga helay Saraakiil ka tirsan Sirdoonka CIA ee Maraykanka ayaa sheegaya in Maraykanka maalmo kahor uu helay fariimo qarsoodi ah oo ay is dhaafsanayeen sirdoonka Sacuudiga oo la xariiray hawlgal ka dhan ah Suxufi Jamal Khashoggi balse waxay sheegeen inaysan la socon in falkan la xariiro dilkiisa ama xiliga la qafaalan lahaa.
Madaxweynaha Maraykanka Trump oo todobaadkii lasoo dhaafay ka aamusnaa arrintan ayaa shalay markii ugu horeysay ka hadlay falkan ka dhacay Istanbul, isagoo ku tilmaamay fal aad u xun hadii uu run noqdo, wuxuuna sheegay inay ka codsadeen Sacuudiga inay arrintan jawaab ka bixiyaan.
“…Arrintan waa mid halis ah mana ogolaan-karno in suxufi ama muwaadin sidan loola dhaqmo…” isagoo intaasi raaciyey inuu qoraal ka helay xaaska Jamal uuna ku casumay Aqalka cad. Jamal ayaa heystay degenaansho dalka Maraykanka ah wuxuuna ka shaqeenayey mudooyinkii danbe Jariirada Washington Post oo lafteeda la sheego inay xiriir dhaw la leedahay sirdoonka Maraykanka.
Waxaana isa soo tareysa cadaadiska hada saaran Dowlada Sacuudiga iyo Dhaxal Sugaha Maxamed Bin Salman oo la rumeysan yahay inuu isagu amarka bixiyey, arrintan oo dhaawac weyn u geysan karta sumcada Sacuudiga uu caalamka ku leeyahay iyo waliba xiriirka ka dhaxeeyey Sacuudiga & wadanka Turkiga oo kamid ah dalalka ganacsiga weyn laleh Boqortooyada Riyadh.